Golden TV के ‘नेजल भ्याक्सिन’ नेपालमै बन्छ? -
May 21, 2021 TOP
काठमाडौं। पूरै दक्षिण एशिया यतिबेला कोरोना महामारीको चपेटामा छ । भारतमा दैनिक ठूलो सङ्ख्यामा कोरोना सङ्क्रमित फेला पर्ने क्रम जारी छ ।
नेपालमा पनि कोरोनाको दोस्रो लहरपछि झण्डै एक लाख २० हजारको हाराहारीमा कोरोना सङ्क्रमित फेला परिसकेको छ ।
स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयका अनुसार कूल चार लाख ८८ हजार ६४५ जना कोरोना पोजेटिभ देखिएका छन् । यो बिहीबारसम्मको तथ्याङ्क हो ।
यस्तै, तीन लाख ६६ हजार ९४६ जना निको भएका छन् । ज्यान गुमाउनेको सङ्ख्या ५ हजार ८४७ छ । कोरोनाको दोस्रो लहर अघिल्लोभन्दा निक्कै सङ्क्रामक रहेको जनस्वास्थ्यकर्मीहरूको भनाइ छ ।
सरकारले यसबीचमा कोरोनाको खोप ल्यायो । भारतबाट अनुदानमा दिएको १० लाख डोज र चीनबाट आएको आठ लाख खोप प्रयोग भइसक्यो ।
सरकारले भारतको सिरम इन्स्टिच्यूटबाट २० लाख डोज खोप किन्ने सम्झौता गरेकामा १० लाख डोज मात्रै आयो र बाँकी तत्काल नआउने भएको छ ।
प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले यहाँस्थित कूटनीतिक नियोगका प्रमुख तथा प्रतिनिधिसँग खोप उपलब्ध गराइदिन आग्रह गर्दै आउनु भएको छ ।
बिहीबार मात्रै प्रधानमन्त्रीले बेलायती राजदूतलाई खोप उपलब्ध गराइदिन आग्रह गर्नुभएको थियो। स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयका अनुसार हालसम्म कूल २१ लाख १३ हजार ८० जनाले कोरोनाको पहिलो मात्रा खोप लगाएका छन् भने चार लाख २६ हजार ५१० जनाले दोस्रो मात्रा खोप लगाएका छन् ।
नेपाल सरकारले चीनबाट खोप ल्याउने तयारी गरिरहेको छ । खोप आइसकेपछि व्यवस्थित रूपले लगाइदिने प्रयोजनका लागि अनलाइनमार्फत् फाराम समेत भराउन थालिसकेको छ ।
उनले सरकारले अनुमति दिएको खण्डमा नाकमा प्रयोग गरेर कोरोना नियन्त्रण गर्न सकिने खोप नेपालमै बनाउन सकिने राससलाई जानकारी दिए।
उनले भने, – “संसारका खोप उत्पादक विभिन्न कम्पनीहरुले नाकमा प्रयोग गर्न सकिने खोपको बारेमा गरेको शोध तथा अनुसन्धानलाई निक्कै अगाडि पुर्याइसकेका छन् ।
केही कम्पनीको खोप त परीक्षणको क्रम मै छ । सरकारले अनुमति दिए आगामी ६ महिनाभित्र नेपालमा पनि यस्तो खोप बनाउन सकिन्छ ।”
डा. सिंहका अनुसार कोरोना भाइरसको लहर फैलिरहेको र एकाध वर्ष अझै यसका नयाँ नयाँ प्रजाति देखा पर्नसक्ने भएकाले नेपाल जस्ता कमजोर आर्थिक अवस्था भएका देशले ठूलो मूल्य तिरेर खोप खरिद गर्न पनि सक्दैनन् ।
त्यसकारण पनि कम लागतमा नाकमा प्रयोग गर्न मिल्ने खोप तयार पार्न जरुरी छ । त्यो काम गर्न सकिन्छ ।
कोरोना बिशेष स्वास्थ्य-जीवनशैली